Ny Fiainantsika sy ny Fanompoana VJ: Fandaharana 13-19 Jolay 2020 | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
Hira 12 sy Vavaka
“Tsy Fantatr’i Farao hoe Nanatanteraka ny Fikasan’Andriamanitra Izy”: (10 min.)
Ek 8:15: Nanamafy ny fony i Farao ary tsy nety nihaino an’i Mosesy sy Arona (it “Mafy Loha” § 2)
Ek 8:18, 19: Niaiky ireo mpisorona nampiasa herin’ny maizina hoe tsy vitan’izy ireo ilay fahagagana nataon’i Jehovah. Mbola mafy loha ihany anefa i Farao
Ek 9:15-17: Tsy tonga dia novonoin’i Jehovah i Farao. Afaka nampiseho ny heriny àry i Jehovah ka lasa fantatry ny olona eran-tany ny anarany (it “Faharatsiana” § 4-6)
Ek 8:21: Inona ilay fihitra resahina eo amin’io andininy io? (it “Fihitra”)
Ek 8:25-27: Nahoana i Mosesy no nilaza hoe “zava-maharikoriko amin’ny Ejipsianina” ny sorona hataon’ny Israelita? (w04 15/3 25 § 9)
Famakiana Baiboly: (4 min. na latsaka) Ek 8:1-19 (th lesona 12)
Video Fitoriana: (4 min.) Fiaraha-midinika. Alefaso ilay video. Fanontaniana: Ahoana no nataon’ilay mpitory rehefa nanohitra ilay olona? Taiza ho aiza tamin’ilay resaka izy no afaka nanolotra boky na zavatra hafa, ary inona no azony nolazaina mba hanolorana an’ilay izy?
Fitoriana: (2 min. na latsaka) Ampiasao ilay hevitra azo resahina. (th lesona 6)
Fitoriana: (3 min. na latsaka) Atombohy amin’ilay hevitra azo resahina. Manohitra ilay olona, ary fanoherana fahita eny amin’ny faritaninareo ilay izy. Miezaka mamaly azy ianao. (th lesona 3)
Fitoriana: (3 min. na latsaka) Atombohy amin’ilay hevitra azo resahina. Manolora boky na bokikely fianarana Baiboly. (th lesona 12)
“Miezaha Hanetry Tena: Aza Midera Tena”: (7 min.) Fiaraha-midinika. Alefaso ilay video hoe Ataovy Namanao i Jehovah: Manetre Tena. Manadinadìna ankizy vitsivitsy eny amin’ny lampihazo. Apetraho aminy ny fanontaniana ao amin’ny pejy 8.
“Miezaha Hanetry Tena Rehefa Misy Midera”: (8 min.) Fiaraha-midinika. Alefaso ilay video hoe Miezaha mba Tsy Hivadika toa An’i Jesosy: Rehefa Misy Midera Anao.
Fianarana Baiboly: (30 min.) jy toko 123, efajoro “Toy ny Ra Nitete ny Hatsembohany”
Hira 44 sy Vavaka
Hizara Hizara 13-19 Jolay
Ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana: Fandaharana ho An’ny 13-19 Jolay 2020